Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IBoeing 777X ifika eDubai kwi2021 Dubai Airshow
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IBoeing 777X ifika eDubai kwi2021 Dubai Airshow.
Inqwelomoya yovavanyo lwe-Boeing 777-9 yenza ukuba iqale kumazwe ngamazwe, ibhabha ingayeki ukusuka eSeattle ukuya kwi-United Arab Emirates.
IBoeing 777X iza kuboniswa kwiDubai Airshow ukuqala nge-14 kaNovemba 2021.
Ukwakha kwezona ntsapho zihamba phambili kwi-777 kunye ne-787 ye-Dreamliner, i-777-9 iya kuba yeyona jethi ye-injini ye-injini enkulu kunye neyona isebenzayo.
I-777X yosapho inee-odolo ezingama-351 zizonke kunye nezibophelelo ezivela kubathengi abasibhozo abahamba phambili kwihlabathi jikelele.
IBoeing 777X entsha ifikile dubai Umbindi weHlabathi ngo-14:02 pm (GST) namhlanje, phambi komboniso womoya waseDubai ozayo. Inqwelomoya iya kuboniswa kwaye iboniswe kwinkqubo yokubhabha yomboniso ukuqala nge-14 kaNovemba.
Inqwelomoya yovavanyo lwe-777-9 yenze malunga neeyure ezili-15 ukubhabha ngaphandle kokumisa ukusuka eSeattle's. iBoeing Umhlaba ukuya dubai, inqwelomoya yokuqala yamazwe ngamazwe kunye nenqwelomoya ende kakhulu ukuza kuthi ga ngoku kwi-777X njengoko iqhubeka nenkqubo yovavanyo olunzima.
Ukwakha kwezona ntsapho zihamba phambili kwi-777 kunye ne-787 ye-Dreamliner kushishino, i-777-9 iya kuba yeyona jethi ye-injini ye-injini inkulu kwaye isebenzayo, inikezela nge-10% yokusetyenziswa kwe-fuel engcono, ukukhutshwa kunye neendleko zokusebenza kunokhuphiswano kunye nomkhweli okhethekileyo. amava. I-777X yosapho ineeodolo ezingama-351 zizonke kunye nezibophelelo ezivela kubathengi abasibhozo abahamba phambili kwihlabathi jikelele. Ukuhanjiswa kokuqala kwenqwelomoya kulindeleke ngasekupheleni kuka-2023.
iBoeing iphuhlisa, ivelise kwaye inikezele ngeenkonzo iinqwelomoya zorhwebo, iimveliso zokhuselo kunye neenkqubo zesithuba kubathengi kumazwe angaphezu kwe-150. Njengomthumeli-mpahla ngaphandle ophezulu wase-US, inkampani isebenzisa iitalente zesiseko soboneleli behlabathi ukuqhubela phambili amathuba oqoqosho, uzinzo kunye nefuthe loluntu. Iqela elahlukileyo le-Boeing lizibophelele ekuveliseni ikamva kwaye liphile amaxabiso aphambili enkampani okhuseleko, umgangatho kunye nokuthembeka.
Novemba 14, 2021 kwi-05: 18
Enkosi ngesithuba esihle. Ndikonwabele kakhulu ukufunda esi sithuba ngokwaneleyo ukuba ndikhangele ukubhala eli nqaku libalaseleyo kunye nesithuba esiluncedo enkosi ngokwabelana. Khangela olu luhlu lwamanqaku anomdla kunye nezincoko kwizihloko ezifana nempilo, ulonwabo, imveliso kunye nokunye.